Shir Shalay ka Dhacay Dalka Holland – Rasaasa News
Shir Shalay ka Dhacay Dalka Holland
Jun 20, 2011 Shir Shalay ka Dhacay Dalka Holland
Rotterdam June 18, 2011 [ras] – Shalay oo Sabti ahayd waxaa shir is barasho ah oo aad loo soo agaasimay isugu yimid magaalada Rotterdam ee dalka Holland [the Netherland] dhamaan qaybaha Jaaliyadaha Ethiopia ee degan dalka.
Jaaliyadaha Ethiopia ee dibadaha ayaa waxay muujinayaan midnimo aan hor loo arag, ka dib kolkii ay madax ka socota dawlada wadaaga ah ee Ethiopia iyo kuwa degaanadu ay socdaalo ku tageen dalalka reer galbeedka iyaga oo sharxay Jaaliyadaha Ethiopia waxa dalka ka jira.
shirka shalay ka dhacay dalka Holland, ayey u jeedadiisa ugu muhiimsan ahayd, in ay isbartaan Jaaliyada Ethiopia iyo walkiilka cusub ee u fadhiya Ethiopia dalalka Holland, Luxenburg iyo Belgium Mudane Kassu Yilala.
Shirka oo uu warbixin dheer ka jeediyey Mudane Kassu Yilala, ayaa sharxay arimaha siyaasada, dhaqaalaha, bulshada iyo nabad galiyada ee uu ku sugan yahay maanta dalka Ethiopia.
Mudane Yilala, ayaa aad ugu amaanay bulshada degaanka Somalida Ethiopia gude iyo dibadba dadaalada dheeriga ah ee ay muujinayaan, ka dib heshiiskii nabad galiyo ee ay qaateen ururadii mucaaradka ahaa.
Yilala, ayaa sheegay in dawlada Ethiopia ay ka go,an tahay in ay isbadal muuqda ka samayso degaanka Somalida Ethiopia oo aad u dib dhacsan ayna daashadeen dagaalo.
Shirka oo ay ka hadleen dad badan oo ka soo qayb galay shirka, ayaa aad loogu amaanay Madaxweynaha degaanka Somalida Ethiopia iyo dadaalada dheeriga ah ee uu ka muujinayo dhinacyada horumarinta iyo sugida nabadgaliyada.
Diplomat, Maxamed Shiil Kabadhe, oo ka mid ahaa dadka sida aadka ah ugu ololeeyey nabada iyo horumarka degaanka Somalida, horena ay dhibaato ugu gaysteen kooxa nabad diidka ah ee Jwxo-shiil, ayaa ku amaanay masuuliyiinta heer degaan iyo dawlada wadaaga ah sida hufnaanta leh ee ay ugu dadaalayaan degaanka Somalida Ethiopia oo isagu ka dambeeya Ethiopia inteeda kale.
Waxaa kale oo isna shirka ka hadlay dhinaca degaanka Somalida Ethiopia Eng. Bashiir Maxamed Khaliif, oo isna sheegay in nabadii ka dhacday degaanka Somalida midhaheedii la guranayo.
Axmed Fenlo, oo isna ku hadlayey magaca Jaaliyada Somalida Ethiopia ee dalka Holland, ayaa sheegay in maanta ay diyaar u yihiin horumarinta degaanka Somalida Ethiopia.
FG. Nasiib daro waxaa meesha uu shirku ka dhacayey isa soo qooday afar maangaab oon wax fahamsanayn, kuwaas oo doonayey in ay shirka dhex fadhiistaan dabadeedna ay buuqaan, laakiin loo diiday in ay albaabka galaan. Waxaa ka mid ahaa dadka shirka loo diiday ee uu Jwxo-shiil, soo dirsaday ninka dheer ee qaabka daran ee ka dambeeya ninka la waraysanayo. Ninkaas oo aanu hayno noloshiisa oo kooban balse aanan doonayn in aanu shaadhka ka saaro, sidaas waxaa yidhi wariyaha Jaaliyada Holland.
Abti-doon “Beenaale Beenaale” Waxaa Yidhi, Taageer Kooxda Jwxo-shiil